Daawo : Caruus farxad darteed la ooyay habeenkii Arooskiisa – AwKutub News
Daawo : Caruus farxad darteed la ooyay habeenkii Arooskiisa
By awkutubnews January 21, 2019 January 22, 2019
Leave a Comment on Daawo : Caruus farxad darteed la ooyay habeenkii Arooskiisa
Muuqaal yar oo laga soo duubay xaflada ayaa lagu arkayay wiilka caruuska ah oo ilmeeynaya ayna illinta ka tirtireeyso gabadha caruusadda ah.
Waxaa dhif iyo naadir ah in la arko nin Soomaali ah oo meel fagaaro ah ku ilmeeyo farxad uu dareemayo awgeed, waxay dadka Soomaalida ah badankood qabaan in ragga ay yihiin kuwa ‘calool- adag’ oo dareenkooda qarsada.
Hasayeshee, waxa taasi beeniyay Sadiiq Cabdinaasir oo dareenkisa aanan qarsan oo xaaskiisa iyo dadkii joogay xafladaba u muujiya jaceylka u u qabo xaaskiisa.
Waxay ahayd habeen xasuus ku reebtay dadka ka soo jeeda gobolka Mudug oo arrintan siyaabo kala duwan uga falceliyay qaarkood ayaa waxayba aaminsanihin in reer Mudug ay yihin dad aanan lagu aqoonin calool jileec.
Qaar ayaa aaminsan in tani ay tusaale u noqon karto raga Soomaalida ah ee qarsada jaceylka ay xaasaskooda u hayaan.
Saadiq Cabdinaasir ayaa sheegay in arrintan baraha bulshada lagu dhax wado aanay wax saameyn ah ku reebin isaga iyo xaaskiisa.
Tags: Aroos Garoowe Soomaali Soomaalida Wararka
Toonta oo Yareysa Khatarta 3 Cudur oo Halis Ah
Shirka suuqgeynta shidaalka Soomaaliya oo maanta London ka furmaya
Previous Entry Booliska Kenya oo shaaciyey Magacyada iyo sawirrada 6dii qof ee weerarkii Nairobi ku lug lahaa
Next Entry Turkiga oo isku diyaarinaya inuu la wareego Magaalada Manbij